Mona Lisa waa sawir gacmeed uu sawiray farshaxankii samir aa ee Talyaaniga ahee ee magaciisa la odhan jiray Leonardo da Vinci waxa uu sawirkan sawiray sanadii, 1615 waana sawir gacmeedka ugu caansan dunida maanta waayo waxa uu koobay waxyaabo badan waxa aad waxloola yaabo ah sida uu u sawiray farshaxankani qosolka ama dhoolo adaynta gabadhan iyo qaabka wajigeedu u muuqdo sawirkani hada waxa uu yaalaa, guri dhaqameedka Louvre sawirkan waxa di vinci ka iibsaday boqorkii la odhanjiray Francis II, Holy Roman Emperor Mona Lisa (luuqada Talyaaniga): Monna Lisa [mɔnna liːza] ama La Gioconda [la dʒokonda], Faransiis: La Joconde [la ʒɔkɔd]) waa farshaxan sawir ah oo nusqaan ah oo uu sameeyay farshaxanka Talyaaniga Leonardo da Vinci waxaa lagu sharxay "sida ugu caansan, ugu booqashada ugu badan, qoraalka ugu badan ee ku saabsan, ugu heesaha badan ee ku saabsan, shaqada ugu caansan ee farshaxanka adduunka".  Mona Lisa sidoo kale waa mid ka mid ah sawirada ugu qiimaha badan adduunka. Waxay haysataa Diiwaanka Guinness World World ee qiimaha ugu sarreysa ee caymiska ee taariikhda $ 100 milyan sannadkii 1962,  taas oo u dhiganta qiyaastii $ 800 milyan sannadka 2017. 
Rinjiyeynta waxaa loo maleynayaa inay tahay sawir galka Lisa Gherardini, xaaskiisa Francesco del Giocondo, waxayna ku jirto saliid ku jirta guddi cadaan ah Lombardy. Waxaa la rumaysan yahay in la rinjiyey inta u dhexeysay 1503 iyo 1506; Si kastaba ha ahaatee, Leonardo ayaa laga yaabaa inay sii wado shaqadeeda dhammaadka 1517. Shaqooyinka waxbarashadu waxay soo jeedinayaan in aan la bilaabin 1513 ka hor.    Waxaa soo iibsaday King Francis I oo Faransiis ah oo hadda waa hantida Jamhuuriyadda Faransiiska, oo muujinaysa joogtayn joogto ah Matxafka Louvre ee Paris tan iyo 1797. 
Mawduuca mawduuca, oo si joogta ah loogu sharraxo inuu yahay mid adag,  muxuu ka kooban yahay qaabka, qaabka ugu fudud ee qaababka, iyo dabeecadda atmospheric ah ayaa ah tayada cusub ee ka qaybqaatay xiisaha joogtada ah iyo barashada shaqada.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Mona_Lisa&oldid=212039"
Last edited on 27 May 2021, at 05:39
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 May 2021, marka ee eheed 05:39.